Heshiiska Uu Cristiano Ronaldo Ugu Biiray Juventus Oo Aan Si Weyn Looga Wada Jeclaan Turin & Shaqaalaha Shirkada Fiat Oo Qorsheeyay Mudaharaad – Kooxda.com
Heshiiska Uu Cristiano Ronaldo Ugu Biiray Juventus Oo Aan Si Weyn Looga Wada Jeclaan Turin & Shaqaalaha Shirkada Fiat Oo Qorsheeyay Mudaharaad
Imaanshiyaha Cristiano Ronaldo ee Turin ayaanan dadka qaar u fiicnayn kadib markii shaqaalihii shirkada Fait ee uu leeyahay qoyska madaxweynaha kooxda Juventus ee Agnelli ay shaaciyeen in ay mudahadaardi doonaa inta u dhexaysa galabnimadii July 15 iyo subaxa 17ka July.
Shirkada reer Italy oo uu qayb ka yahay madaxweynaha kooxda Juventus ee Andrea Agnelli, ayaa lagu wadaa inay 30 milyan oo euros ku bixiso ololaha xayaysiinta soo bandhigista weeraryahankii hore ee Real Madrid.
Waxa intaas sii dheer in heshiiska xiddiga reer Portugal uu kooxda Juventus ku qaadan doono in ka badan 340 milyan oo euro marka lagu daro mushaharka xiddiga, cashuuraha iyo 112-kii milyan ee ay ka bixisay adeega xiddiga.
Si kasta ha ahaatee shaqaalaha Shirkada Fiat ayaan wax mushahar ah la siin sanadihii ugu dambeeyay waxana ay go,aansadeen in ay mudaharaadaan lacagta waalida ah ee laga bixinayo xiddiga.
“Miyay caadi tahay in qof kaliya qaato malaayiin ama kumanaan halka qoysaska qaar kaliya helaan waxa y ku noolaadaan ilaa bartamaha bisha”.ayuu yiri mid ka mid ah shaqaalaha shirkada.
Dhanka kale wargayska Tuttosport ayaa sheegaya in Liverpool ay ku dhowdahay inay 90 milyan oo euros ku qarash gareyso Paulo Dybala, halka Gonzalo Higuain ku dhae yahay in uu ka tago kooxda.